China ND200 vagadziri uye vanotengesa | Jianma
Yakarurama, inokurumidza, inotakurika uye nyore kushandisa
Isothermal yekuwedzera tekinoroji ndiyo nyowani nucleic acid (gene) yekuwedzera tekinoroji.
Se mamorekuru biology mu vitro yekuona tekinoroji, maitiro ekuita anogara ari pane tembiricha yenguva dzose, kuburikidza nema enzymes uye chaiwo ma primers kuzadzisa chinangwa chekukasira kukwidziridzwa kweiyo nucleic acid.Iine hunhu hwehukosha hwepamusoro, hukuru hwekunzwisisa, nyore, nyore uye yakaderera mutengo.
Yakave ichishandiswa zvakanyanya musainzi yakakosha, kuchengetedzwa kwechikafu (kuonekwa kwehutachiona hutachiona, kusanganisa kweiyo nyama zvigadzirwa, kutaridzika kwehutachiona, nezvimwewo), zvekurapa uye hutano (chirwere chirwere, geni kutaura, kusimudzira zvinodhaka uye zvine hungwaru kushandisa nhungamiro yekushandisa zvinodhaka, nezvimwewo) , kubatwa kwechirwere chemhuka (mhuka hombe, mhuka dzinovaraidza, mhuka dzemumvura, nezvimwewo), kuongorora kwezvakatipoteredza nemimwe minda.
Nd200 isothermal fluorescent PCR detector yakavakirwa pasirese inotungamira isothermal nucleic acid yekuwedzera tekinoroji uye akawanda makore esainzi uye tekinoroji kubudirira.
Iyo yakanyatsogadzirirwa isothermal amplification kuona. Iyo yakarurama, inokurumidza, inotakurika uye nyore kushandisa. Iyo inogona nyore kupedzisa iyo nucleic acid yekukurumidza kuona kushanda uye ikubatsire iwe neicho chaicho-nguva kuona kwe nyukireya acid.
Yakarurama tembiricha yekudzora kurongeka ndeye ± 0.1 ℃, yepamusoro tembiricha yekudzora uye openya zvikamu
Kutsanya uye kwakaringana tembiricha kudzora, chaiyo-nguva kuratidzwa kwekutsvaga mhedzisiro
Inotakurika, diki saizi, kurema kurema, yakakodzera kukurumidza kuongorora uye munda
Nyore kushandisa kubata ruvara skrini, mushandisi-inoshamwaridzika interface oparesheni
> nzvimbo yekushandisa
Kudya Kwekuchengetedza Utano
>> Chigadzirwa zvakanakira
Diki saizi, kurema uremu, nyore kutakura. Nyore kusangana nezvinodiwa zvekuyedza.
1. Yakavakwa mu7-inch yakakwira-tsananguro capacitive skrini PDA, inobata skrini yekushanda, yakapusa uye inokurumidza.
2. Iyo 16x0.2ml reaction module inoenderana neasere mitsara machubhu uye imwechete machubhu.
3. Marlow yemhando yepamusoro Peltier firiji chip, inosanganiswa neGerman yepamusoro-kumagumo PT1000 tembiricha sensor uye yemagetsi kuramba kudziya muripo pamucheto tembiricha yekudzora modhi.
4. Nyore uye intuitive software kutungamira, nyore kuvhura isothermal fluorescence PCR kuyedza.
Hot chivharo dhizaini
Kuita kwekutanga Zviyero 320 * 280 * 152mm
uremu 2.9 Kg
ruzha pamwero 20 分贝
Inoshanda tembiricha iri mukati 4 ~ 35 ℃
Hukama hunyoro hwekutakura nekuchengetedza ≤85%
Inoenderana parameter Mharidzo chinzvimbo Makomba 16 * 0.2ml
Zvinoshanda zvinoshandiswa 0.2ml imwechete chubhu, 8 * 0.2ml mutsara chubhu
kit yekuyedza Vhura isothermal fluorescence kuona
kudzora kurongeka ± 0.1 ℃
Kupisa kufanana ± 0.15 ℃
Kupisa kwekushisa ± 0.2 ℃
light source Kupenya kwepamusoro LED
Kufadza uye kuona kwekupatsanura svikiro Yakakwirira tembiricha inodzivirira nyanzvi Optical fiber
Kunakidzwa wavelength 470nm ± 10nm
Kuona wavelength 520nm ± 10nm
Operationcontrol kudzora modhi Ruvara rwekubata skrini
Mhedzisiro yacho inoratidza izvozvo Muchina unogona kuratidza munguva chaiye uye kubuda nemipendero yezvinhu
Nzira dzedudziro yemhedzisiro Otomatiki kududzirwa kweYin uye Yang zvinoenderana nekukwiridzira software
software basa Iyo reaction reaction inogona kusarudzwa; maitiro ekugadzirisa anogona kuiswa; kana nguva yekuita ichigona kuiswa, nguva yekuita inogona kushandurwa (kupfupiswa kana kuwedzerwa) mune yekuita maitiro, tembiricha dzakasiyana dzinogona kumisikidzwa, uye yega tembiricha renji iri 0.1 ° C; chirongwa chekuita chinogona kuponeswa se template; maburi akasiyana anogona kutumidzwa zita; nguva yekupenengura inogona kumisikidzwa, kubva pa18 kusvika 60 s, uye iyo default default iri 60 s; Iyo yenguva yenguva inogona kumisikidzwa, iyo nhanho iri 18-60s, iyo default nguva iri makumi matanhatu; iyo nguva yenguva inogona kumisikidzwa, iyo nhanho iri 18-60s, iyo yekumisikidzwa yenguva iri makumi matanhatu; kukosha kwechikumbaridzo cheYin-Yang kutonga kunogona kuiswa; mutsetse wechikumbaridzo unogona kudhonzwa kumusoro uye pasi.
Zvadaro: SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Kuziva Yese Solution
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. China Rapid Bvunzo Kits, Rapid Nucleic Acid Kubvisa Kit, Kubvisa-Mahara Kit, Canine Parvovirus (Cp),